Faahfaahin Dheeriye oo ku saabsan Dagaalo Caawa ka soconaya Deegaanka Bariire ee Sh/Hoose oo Maanta lagala wareegay Alshabaab. – Hornafrik Media Network
Dagaal Culus ayaa lagu soo waramayaa inuu caawa ka soconayo Deegaanka Bariire ee Gobalka Shabeeladda Hoose, Waxaana Dagaalkan uu billowday kadib markii Maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab ay Maqribnimadii Caawa soo weerareen Goobo ay fariisimo ka samaysteen Ciidamaddii Huwanta ahaa ee ka qabsaday Saaka Magaaladaasi.
Daryanka Madaafiicda iyo Rasaasta ayaa asqeeyay gabi ahaanba Awdhiigle, qaybo ka mida Magaaladdu way gubanaysaa, Waxaaana Dagaalku uu ka socdaa illaa iyo 3 Jiho oo ay Magaaladda ka soo weerareen Maleeshiyaadka Alshabaab.
Alshabaab waxay sheegteen inay Magaaladda qayb ka mida hadda maamulayaan, balse ma jiraan illo Madax banaan oo xaqiijinaya arrintaasi. Waxayse baahisay Warbaahintoodu in Dagaalka ay guulo ka gaareen.
Saakay ayeey Ciidamadda AMISOM, Kumaandoosta Somalia ee Danab, iyo Ciidamo Maraykan ah weerar ku qaadeen Deegaanka Bariire, Waxayna iska caabin ay sameeyeen Alshabaab kadib ay ka fara maroojiyeen gacan ku haynta Magaaladaasi. Waxaana Dagaalkaasi uu sababay Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo dhinacyaddii dagaalamayay ah iyo Dad Rayid ah.
Maamulka Gobalka Shabeeladda Hoose waxay sheegeen in lagala wareegay Alshabaab Deegaanadda Sabiib, Caanood, Mareereey, iyo Bariire oo dhamaantood ahaa goobo ay gacanta ku hayeen Alshabaab. Waxayna Maamulku sheegeen in dhamaan deegaanadan laga dajiyay Calankii Madoobaa ee ay Kooxdu caanka ku ahayd, haddana uu ka taagan yahay Calanka Soomaaliya.
Bariire oo 60 KM dhinaca Koonfureed Muqdisho ka xigta waxay ahayd Magaalo Istaraatiiji ah oo Saldhigyo wayn ay ka samaysteen Kooxda Alshabaab, Waxayna Kooxdu kaga dhigan tahay in Magaaladaasi lagala wareegay inay waysay Taliskoodii ugu waynaa ee ay ka abaabuli jireen Weeraradda iyo Qaraxyadda ay gaystaan Muqdisho iyo Deegaanadda u dhow.
Farmaajo oo Saaka u dhoofay mid ka mida Wadamadda Isbahaysiga Sucuudiga.